Soo ogow qaar ka mid ah hudheelada ugu wanaagsan ee ku yaal Lisbon | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Guryaha, General, Lisboa
La Magaalada Lisbon waa caasimada Boortaqiiska waxayna na siisaa meelo aan dhammaanayn oo aan soo booqano. Joogitaankeedu wuxuu noqon karaa caqabad, maadaama ay tahay meel ay ka buuxaan dalxiisayaal sannadka oo dhan. Haddii aad jeceshahay inaad joogtid hudheelada ugufiican intaad ka ogaanaysid geesaha magaaladan, waxaan ku siin doonaa xoogaa fikrado ah inaad ka hesho hudheelo ku yaal Lisbon.
hay hudheelada gaar ahaan xiisaha leh, oo bixiya adeegyo dheeri ah iyo dhammaan raaxada, marka lagu daro goob aad u fiican. Mararka qaar raadinta hoy waa wax aad u dhib badan ama caajis ah waana sababta ay u fiicantahay in xoogaa dhiirrigelin ah laga caawiyo inaan go'aan gaarno.
1 Matxafka Eurostars
2 Huteel Taariikhi ah Santo Lisbon
3 Martinhal Lisbon Chiado Qolalka Qoyska
4 Hoteelka Valverde
5 WC Qurxinta Hoteelka Lisbon
7 Afarta xilli ee Hotel Ritz Lisbon
Matxafka Eurostars waa mid ka mid ah hudheelada shan xidigle ee magaalada Lisbon. Waxay ku taal dhisme taariikhi ah oo gebi ahaanba la dayactiray webiga agtiisa iyo xaafadda caanka ah ee Alfama. Bannaanka hudheelka ayaa soo jiidasho leh oo leh dusha sare ee dusha sare, qaab dhaqameedkii Boortaqiiska. Dhinaca kale, gudaha hudheelka waxaa ku yaal bandhig qadiim ah oo joogto ah si aad ugu raaxeysato naftaada intaad joogto. Gudaha hudheelka waxaad ku raaxeysan kartaa qubeyska Turkiga, qolka duugista iyo xarunta jir dhiska.
Huteel Taariikhi ah Santo Lisbon
Huteelkani wuxuu dhawr mitir u jiraa xaafadda caanka ah ee Chiado. Huteelkan waxaan ka arki karnaa qayb ka mid ah taariikh qarnigii XNUMXaad Fernandina Wall iyo aragtida guryaha qarnigii XNUMXaad. Qolalka oo dhan waxaad ku raaxeysan kartaa aragtiyo cajaa’ib leh oo ku saabsan aagga webiga shaki la’aanna waxaan u dhowaan doonnaa qodobo badan oo xiiso leh oo aan ku soo booqan karno cag sida Madxafka Chiado, Suuqa Ribeira ama Fagaaraha Rossio. Waxaad ku bilaabi kartaa subaxda quraac macaan oo qaaradeed leh cuntooyin kaladuwan oo kaladuwan.
Martinhal Lisbon Chiado Qolalka Qoyska
Hoteelkani wuxuu kaloo ku yaal a meel aad u dhexeysa aagga Chiado. Waad dhigan kartaa gawaarida agteeda waxaana jira makhaayadaha ilaa baararka iyo dukaamada ku dhow. Hoteelkani waa meesha ugu habboon qoysaska, maadaama halkii qolalku ku lahaayeen istuudiyaha yar yar ee bixiya shaqooyin aad u fiican inta ay joogaan. Waxaa lagu sharraxay qaab aad u casri ah waxayna leeyihiin jiko buuxda oo leh mashiinka dharka lagu dhaqdo. Hoteelka ayaa sidoo kale leh adeegyo haynta carruurta iyo naadiyada carruurta oo ay carruurtu ku ciyaari karaan kuna baashaali karaan Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay qolal loogu talagalay qoysaska carruurta leh, maadaama ay leeyihiin dhalooyin, ilaaliyeyaal iyo wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku daryeesho midka yar. Shaki la'aan mid ka mid ah hudheelada ugu fiican qoysaska ku nool Lisbon.
Waxay ku taal caan ku ah Avenida da Liberdade, hudheelkani wuxuu ku dhow yahay dukaamada raaxada ugu fiican. Waxay leedahay jawi raaxo leh oo qurux badan, oo leh alaab guri oo u dhexeysa tan casriga iyo miyirka. Midabada mugdiga ah ee qolalka qaar waxay siinayaan hawadaas casriga ah. Hoteelka ayaa aad loogu qiimeeyaa sida wanaagsan ee shaqaaluhu ula macaamilaan macaamiisheeda, laakiin sidoo kale inay tahay meel ku habboon in lagu dhagaysto fado Portuguese caan ah fadhiyada tooska ah.
WC Qurxinta Hoteelka Lisbon
Huteelkan casriga ahi waa ay ka buuxaan casriyeyn iyo shaqeyn. Waxay bixisaa meelo raaxo leh oo lagu qurxiyo qaab casri ah oo raaxo leh oo qancin doona dhadhanka ugu baahida badan. Waxay ku taal meel dhowr mitir u jirta bartamaha magaalada taariikhiga ah, sidaas darteed sidoo kale waa hoyga ugu habboon ee lagu arko meelaha xiisaha u leh. Quraacda macaan ee badan ee laga cunteeyo makhaayadeeda ayaa taagan, oo leh suxuunta qaabka Burtuqiiska loogu adeego jawi jacayl. Qolalka qaar waxaad ku raaxeysan kartaa qubays nasasho leh oo ku yaal bartamaha qolka jiifka iyo telefishanka hortiisa.
Kani waa hudheel kuwa ku raaxeysta deegaanno dabiici ah oo soo jiidasho leh. Huteelkani wuxuu leeyahay aragti wanaagsan oo ku saabsan webiga iyo São Jorge Castle. Hoteelka sidoo kale wuxuu leeyahay dalxiis aad u fiican oo aad ku nasato ka dib booqashada magaalada. Dalxiiskani wuxuu leeyahay aag hydromassage ah, sauna, qubeyska Turkiga, aag jimicsi oo jimicsi leh iyo sidoo kale aag aaladaha daaweynta jirka ah. Waad ku sii raaxeysan kartaa maalinta aagga maqaayada, halkaasoo laga cuno suxuunta u eg talyaaniga.
Afarta xilli ee Hotel Ritz Lisbon
Tani waa mid ka mid ah hudheelada ugu raaxada badan dhammaan Lisbon. Qolashiisu runtii waa waasac, rooga jilicsan iyo aag fadhiga ah oo aad fadhiisan karto oo aad ku nasan karto. Inta lagu jiro quraacda waxaad dooran kartaa mid ka mid ah miisaska ku yaal balakoonka si aad ugu raaxeysatid aragtida weyn ee magaalada adoo dhadhaminaya suxuunta. Hoteelka ayaa sidoo kale leh jimicsi aad u dhameystiran iyo adeeg isboorti si martidiisu maalin walba ugu nastaan. Waxay ku taal Rúa Rodrigo da Fonseca, aag bartamaha magaalada ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Hoteelada Lisbon
Macbadka Dahabka ah, ee Hindiya
Ku raaxayso Suuqa Dhexe ee Vitoria